यस्तो छ नक्कली सुन, सक्कली लुटेरा | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
यस्तो छ नक्कली सुन, सक्कली लुटेरा
प्रकाशित मिति १८ जेष्ठ २०७५, शुक्रबार १५:०१ लेखक नेपालीजनता
काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले लुटिएको नक्कली सुनसहित लुटेराहरुलाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले १ किलो सुन लुटिएको सूचनाका आधारमा खोजी गर्दा पक्राउ परेका लुटेरहरुसँग बरामद भएको सुन जाँचको क्रममा नक्कली भएको पत्ता लागेको हो ।
प्रहरी परिसर काठमाडौंले जेठ १० गते बा २ ज १९२३ नम्बरको ट्याक्सी चालकले दिएको सुन लुटपाटको सूचनामा अनुशन्धान गर्दै जाँदा नक्कली सुनसहित लुटेरहरु पक्राउ परेका हुन्। गोगंबुबाट पोखरा जान लागेका यात्रु ओमनाथ देवकोटाको साथबाट दुई वटा मोटरसाइकलमा आएका तीनजना केटाहरुले एक किलो सुन लुटेको खबर ट्याक्सी चालकले प्रहरीलाई दिएका थिए।
त्यही सूचनाका आधारमा प्रहरीले गोगंबु बस्ने कुमार केसीले सोनाम भन्ने नेमजुङ्ग तामाङसँग एक किलो सुन खरिद गर्ने सहमति गरेको तथ्य पत्तो पायो। उनीहरुबिच सुन बिक्री वापत तत्काल दस लाख दिने र बाँकी रकम बिक्री पश्चात दिने सहमति भएको थियो।
कामको सिलसिलामा पोखरा रहेका कुमारले सुन किन्न ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकमा आफ्ना साथी ओमनाथ देवकाटाले पाउने गरी डिपोजिट गरिदिएका थिए। कुमारले भने अनुसार ओमनाथले सो रकमले सुन किनेर पोखरा फर्किंदै गर्दा सुन लुटिएको तथ्य थाहा पाएसँगै प्रहरी सुन लुटेराको खोजीमा लागेको थियो।
अनुशन्धानमा सुन बेच्नका लागि देव भन्ने कोतबहादुर तामाङले सुन ग्राहक खोजेर सोनामलाई भेटाइदिएको र सुनको किनबेच भएपछि उनी आफैंले उक्त सुन लुट्ने योजना बनाएको देखिएको छ। सुन किनेर पोखरा लिएर जाने बेलामा लुटने योजना अनुसार नै देवले आफ्ना साथी नविन गुरुङलाई खबर गरेको र नबिनले पनि आफूहरुलाई सघाउन अर्का सहयोगी निमा लामालाई भनेको र उनले पुनः राजिबकुमार बोलोन, अर्जुन तामाङ र बानसन श्रेष्ठलाई खबर गरेपछि सुन लुटने योजना तय भएको देखिएको छ।
योजना अनुसार बा ७४ प २७१९ नम्बरको मोटरसाइकल र बा६६प ३१५६ नम्बरको स्कुटर र एक स्कार्पियो गाडीमा सुन लिएर जाँदै गरेको देवकोटाको ट्याक्सी पछ्याउँदै दहचोकमा ट्याक्सी रोकेर ओमनाथलाई कुटपिट गरी सुन लुटेको देखिएको प्रहरीले बताएको छ।
लुटेरा समूहलाई पक्राउ गरेपछि र निमाको साथबाट सुन बरामद भएको र सोको परिक्षण गर्दा नक्कली सुन किनबेच र लुटपाट भएको तथ्य प्रहरीले चाल पाएको हो।
प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोख्रेलले नक्कली सुन भन्ने कुरा अनुसन्धानको अन्तिममा मात्रै पत्ता लागेको बताए। एसएसपी पोख्रेलले यो घटना सार्वजनिक भएसँगै नक्कली सुनलाई सक्कली भनेर अवैध कारोबार गर्नेको समूह नै राजधानीमा सक्रिय रहेको देखिएको पनि बताए।
विप्लवप्रति लचिलाे बन्दै सरकार
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति सरकार लचक बन्दै गएको पाइएको छ। प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएका विप्लव…
नेकपा बैठकमा कार्यदलबारे विवाद, विघटन गर्ने ओलीको प्रस्ताव
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकमा सांगठनिक एकताबारे गृहकार्य गर्न गठित कार्यदलको म्याद थप गर्ने नगर्नेबारे…
सस्तो मदिराका कारण आक्रान्त बन्दै समाज, कलिलै उमेरमा थुप्रैको जीवन बर्बाद हुने स्थितिमा !
अछाम । अत्यधिक मात्रामा मदिरा सेवन गर्ने बानीले थुपै्र अछामीको जीवन नै…
नयाँ भर्ना नलिएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभावै
काठमाडौं । प्रदेशस्तरीय लोकसेवा आयोग गठन गरी नयाँ कर्मचारी भर्ना नलिएसम्म प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव हुने अवस्था देखिएको छ ।
सशस्त्रमा असन्तुष्टि छताछुल्ल, नेतृत्वले विभेद गरेको भन्दै गृहमा उजुरी
काठमाडौं । यही फागुन ५ गते साँझ सशस्त्र प्रहरीमा एसपी पदमा बढुवा सार्वजनिक गरिएलगत्तै एआईजी नारायणबाबु थापाले फेसबुक स्टाटसमा…
आकर्षक जागिर पाउने लोभमा पर्दा ३३ लाख रुपैयाँ गुम्यो
काठमाडौं । लामालेस्पेन र पोर्चुगलमा आकर्षक जागिर लगाइदिने प्रलोभन दखाएर ठगी गर्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ…
आफ्नैलाई आफ्नो मान्न छोडिसकेको समाजलाई नियालेर हेर्दा !5views
यसरी गरिन्छ पोर्न फिल्मको शुटिङ5views